Baaxadda Project Belt iyo Road ee Shiinaha Turkey uu Kordhinta Muhiimadda | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraShiinaha ee Generation iyo Turkey ayaa Muhiimadda Kordhinta of Xaaladda Project Road
27 / 11 / 2019 06 Ankara, 86 Shiinaha, Gobolka Central Anatolia, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
mashaariicda jiilka siriq iyo wadada sii kordhaya baaxadda turkiyenin onemi
Turkey uu Kordhinta Muhiimadda Macnaha of Project Belt iyo Road ee Shiinaha; Qorshaha Ankara ee Central Corridor-ka wuxuu noqon doonaa shaygii ugu horreeyay ee Shirka Wadooyinka Agenda ee Nederland
muhiimadda ay leedahay Turkiga ee network ganacsiga kordhin ka Europe si Shiinaha waxaa maalin kasta sii kordhaya. Markii tareenkii ugu horreeyay ee xamuul ah oo ka ambabaxa Shiinaha uu ku sii jeedo waddada loo yaqaan 'Generation Road', oo gaadha magaalada Marmaray ee Yurub isaga oo adeegsanaya Marmaray ee Istanbul ayaa mar kale u jeestay dhanka Waddada Dhexe. initiative Shiinaha ee Central Corridor jeediyay Turkey si loo yareeyo sida ay uga go'antahay in Russia iyo xukuumadda Beijing, oo ay timaado in ganacsiga marka la eego iskaashiga dalalka Yurub, iyo sidoo kale meel fog waa la soo gaabiyey. Sidaa darteed, Turkey ee Central Corridor initiative, in 26-27 Shirka Belt Road in la qabtay bishii November ee Venlo, Netherlands waxa uu noqon doonaa shayga ugu horeeya ee ajandaha.
Raad HABOON DHEERAAD AH EE TURKEY
Falanqaynta ayaa sidoo kale tilmaamaysa in khadka Baku-Tbilisi-Kars uu bilaabay inuu si badbaado leh u shaqeeyo. tareenka si degdeg ah ka Edirne in Kars, Turkey ka dhigi doonaa nidaamka tareenka in ay dhacdo fulinta sii kordhi doonaa muhiimadda ay leedahay in Central Corridor. Turkiga waxaa la qaban doonaa wadada tareenka ka Edirne in Kars waxaa la ogsoon yahay in Shiinaha sii waraysiga. Saxaafadda Shiinaha, ayaa dhanka kale, ku qeexeysa Wadada Isku xirka Dhexe tiir muhiim u ah Waddada "Belt Road". Khubarada ayaa sidoo kale sheegay in ay u dhigmaan biraha la soo gaabiyey xawaaraha tareenada xamuulka iyo masaafada in Turkey Marmaray waa ka duwan oo ah in ay waddada Russia. Tareennada xamuulka ah ee ka yimaada Shiinaha kuna sii jeedo magaalada Venlo ee Netherlands ayaa sidoo kale la filayaa inay maraan Waddo Casri ah Gaadiidka Caalamiga ah ee Cas-Cas (TITR). tareenada xamuulka ka fogaadaan sida Shiinaha, Kazakhstan-Caspian Sea-Azerbaijan-Georgia-Turkey gaari doonaa in Europe. Kadib markii tareenka ugu horreeya ee xamuulka qaada uu ka ambabaxayo Xi'an, Shiinaha, 18 wuxuu gaadhay Prague, oo ah caasimada Czech. (Çinhab waa)
Jiilaalka Shiinaha iyo Shaqada Wadooyinka si loo Dardar Galiyo Gaadiidka
Kafkasya- oggaadaan ogolaanshaha iyo musharax dal ee Euro-Asian Transport Corridor oo Kordhinta Table Muhiimadda Turkiga ee ...
Mid ka mid ah Project Belt Road One Translate Danta of ganacsatada Shiinaha Turkiga
Mashruuca Wadada Jiilka, 40 si Badbaadinta Malaayiin Dadka Looga Siiyo Saboolnimada
Mashruuca Tareenka ee si wadajir ah loogu dhisay dalka Shiinaha ee Gobolka California, USA
Anatolia 'hal jilaa hal waddo'
Hantida iyo Wadada 'Win-Win'
Mashruuca Belt iyo Road
Wadada Dhexe ee Isku xidhka
Wadada Gaadiidka Caalamiga ah ee Casriga ah